Inona avy ireo ota mahafaty 7 ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iza ireo Fahotana mahafaty 7. Ny lisitr'ireo fahotana mahafaty fito dia niforona tamin'ny taonjato faha-XNUMX am.f.i., ny fomban-drazana katolika dia mitazona izany ny ota mahafaty fito no mahatonga ny ota hafa rehetra. Tsy milaza an’izany ny Baiboly, fa manaiky fa fahotana izany ka tokony hohalavirina.
1 Inona avy ireo ota mahafaty 7 araka ny voalazan'ny Eglizy Katolika
1.1 1. Fireharehana
1.2 2. fitsiriritana
1.3 3. Fitiavam-bola
1.4 4. Fahatezerana
1.5 5. Fitiavana
1.7 7. Hakamoana
2 Moa ve ny ota mahafaty 7 ao amin'ny Baiboly?
Inona avy ireo ota mahafaty 7 araka ny voalazan'ny Eglizy Katolika
Mifandray amin'ny zava-poana sy avonavona izany. Ny avonavona dia rehefa misy mihevitra azy ho ambony, manao tsinontsinona ny hafa. Eo koa ny tsy fahampian’ny fanekena ny fiankinantsika amin’Andriamanitra. Ny fireharehana dia mifanohitra amin’ny fanetren-tena. Milaza ny Baiboly fa ny mpiavonavona no haetry, fa ny manetry tena kosa hasandratra.
"Satria mamonjy ny ory Hianao, fa ny masonao mitsinjo ny mpiavonavona mba hampietry azy." 2 Samuel 22: 28
Endriky ny fitiavam-bola ny fitsiriritana . Tsy faly ny mpitsiriritra rehefa misy olona mahazo fitahiana, satria ho an’ny tenany ihany no iriany izany fitahiana izany. Tia tena ny fitsiriritana. Mampitandrina antsika ny Baiboly mba tsy hialona, ​​fa hianina amin’izay ananantsika ary hifaly amin’ny fifalian’ny hafa.
« Aoka isika tsy hirehareha, hifampisosotra, hifampialona. Galatianina 5:26
Ny fitiavam-bola dia firaiketam-po tsy ara-pahasalamana amin'ny harena. Ny olona tia vola dia manangona harena, tsy tia mandany ary tsy te hizara izany amin'iza na iza. Fitiavam-bola ny fitiavam-bola. Mampianatra antsika ny Baiboly fa malala-tanana, fa tsy mirona be loatra amin’ny vola.
Noho izany, manana fivelomana sy fialofana, aoka isika hifaly amin'izany.
Fa izay ta-hanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady manimba, izay mandentika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana;
fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, izay nitsiriritra ny sasany ka very finoana ka nolefon’ny fanaintainana be”.
1 Timoty 6:8-10
Lasa tezitra be ny hatezerana, manao zavatra feno habibiana na mahery setra. Misy zavatra mahatezitra antsika ary marina izany, fa ny hatezerana dia miteraka fihetsika diso. Izay anjakan’ny fahatezerana dia mankahala ny rahalahiny ka te hamaly faty, nefa tsy afaka mamela heloka. Mampianatra antsika hifehy ny fahatezerantsika ny Baiboly, ka handresy ny ratsy amin’ny tsara.
“Aza mamaly ratsy, ry malalako, fa omeo toerana ny fahatezeran’Andriamanitra; fa voasoratra hoe: Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly, hoy Jehovah.
Romana 12: 19
Ny filan'ny nofo dia faniriana ny fahafinaretan'ny nofo. Ny olona anjakan’ny filan’ny nofo dia mivelona amin’ny fahafinaretana, nefa tsy mifehy tena. Ny filana dia mitarika ho amin’ny fijangajangana, satria tsy mahafehy ny faniriany ny olona. Mampirisika antsika ny Baiboly mba handositra ny fahalotoam-pitondrantena ary hifehy ny vatantsika.
mandosira ny fijangajangana. Ny ota hafa rehetra ataon’ny olona dia eny ivelan’ny tena; fa izay mijangajanga kosa dia manota amin'ny tenany.
1 Korintiana 6:18
Tendan-kanina: inona ireo ota 7 mahafaty
Ny fahaketrahana dia mihinana mihoatra noho ny ilaina, noho ny faniriana hihinana fotsiny. Misy ifandraisany amin’ny fahamamoana sy ny tsy fahampian’ny fifehezan-tena koa izany. Ny fahafinaretana mihinana sy mampijaly ny tenany ihany no eritreretin'ny mamy. Mampianatra antsika ny Baiboly mba hanalavitra ny fimamoana sy ny tendan-kanina ary hanaja ny vatantsika.
Ny hakamoana dia tsy te hiasa. Manan-jo hiala sasatra isika rehetra, nefa tsy maintsy miasa koa mba hamelomana ny ankohonantsika. Ny kamo mandositra ny andraikiny ka miteraka korontana fotsiny. Mampitandrina ny Baiboly fa ho mahantra ny kamo, fa hahazo valisoa kosa ny mazoto.
Moa ve ny ota mahafaty 7 ao amin'ny Baiboly?
Tsy misy lisitry ny ota mahafaty ao amin’ny Baiboly, fa ao amin’ny Ohabolana 6:16-19 , dia afaka mahita lisitr’ireo fahotana mahafaty isika. fahotana fito halan'ny Tompo:
Hankahala zavatra enina i Jehovah,
Ary na dia fito aza no mankahala ny fanahiny:
ny maso miavonavona, la lela mandainga,
ny tanana mandatsa-dra tsy manan-tsiny,
El ny fo mamolavola ny eritreritra ratsy,
Ny tongotra maika ho mihazakazaka mankany amin'ny ratsy,
Ilay vavolombelona sandoka tsy marina Mentiras,
Ary ny iray mamafy korontana eo amin’ny mpirahalahy.
Ohabolana 6: 16-19
Manantena izahay fa hanampy anao ity lahatsoratra ity hahatakatra ny atao hoe ota mahafaty 7 sy ny fiaviany. Raha tianao izao mianatra mandresy ny fahotana amin'ny alalan'ny andiana toro-hevitra ara-baiboly, manohy mijery Discover.online.